Warri basa Sioux City yaabatu harbaa dhuftu irraa jalqabe akka haguugu fuula gudhatan gabaafame
Published July 27, 2020 at 10:45 PM CDT
Warri basa Sioux City yaabatu harbaa dhuftu irraa jalqabe akka haguugu fuula gudhatan gabaafame. Kunis harbaa iraa jalqabe hanga gabaasni biraa bahutti ittuma fufa.
Akkasumas harbaa irraa jalqabe, official Sioux City gamoodhan keessati akka haguugi fuula godhatan ibsame.
Woodbury County keessatti namni haarawa Covid-19 qabame 15 dha. Akka gabaasa IDPH har’a ganamaati, waliigalati County keessati namni Covid-19 qabame3,561 dha. Namni haarawa virus due hin jiru, namni waliigalatti due 47 dha.
Akka lakkoofsi Iowa official mullisutti torbaan tokko keessati state keessati namni haarawa qabame 800 oldha. Kunis waliigalatti nama qabame Iowa keessatti kara 42,500 olsiisa.
State corona virus kan too’atu akka mulisutti torbaan kana keessa sababa corona virus namni baayen du’uu mulisa. kunis waliiglatti akka har’a ganamati namni due kara 832 olguddatee jira.
Akka site mullisutti nama corona qabaman keesa namni 29,800 fayyuu mullisa. Waliigala Iowa keessati namni dhukkuba kanaaf qorannoo godhe hanga har’a ganamaati nama 456,385 dha.
Akka ogeessi fayyaa himeeti Nebraska keeesatti namni haarawa qabame 224 yoo tau waliigalatti namni qabame 24,618 dha, akkasumas namni due 316 dha.namni haarawa due ammaaf hin jiru. Dakota County keessati namni waliigalatti qabame 1,850 dha, Thurston County ammo 196 dha.
South Dakota keessati namni qabame 8,395 fi Namni due 123 dha. namni haarawa due hin jiru. Union County keessati namni waliigalatti qabame 175 dha, Clay County keesati 106 , Yankton County keessatimo 100 dha. Yankton fi Union County kessaati namni lama haarawa du’eera.
Akka resulting haarawni ka serve warri galmee state waajjira irraa gan dhiifametti wiyxata har’aa state baayen warra qarqaarsa kardii fayyaa irraa gamachuu hin arginine.
Serve kun kan argame gara ummata state keessaa jiraatu 2500 kan qarqaarsa medicala sagantaa mootuma jalatti argatuuf, garuu ka deebi nuudeebise nama 800 qofa.
Harkii 41% akka jedhanitii akkaata manni fayyaa nuqarqaaru irraa akka gamachuu hin qabne mullisan akkasumas sababa covi-19 kunis doctarini akka dhukubsataa jaraa tolchanii hin laale dhoogge harkii hafe ammo waan arganne irraa baaye gammane jedhani deebiasani.
Nyaanni beekama makiina fe’aatin ummaata magaala Sioux City qoodamu ture jum’a kanaa irra magaala kanatti deebi’a, garuu sababa dhukkuba seera adda addaa baafatetiniini. Seera kunis ummani wayta dhufee nyaata bitatu fudhatani deemu, akka nyaata bitatani mana ufiti galutuun yokin waajira ufiiti debifatu akka gorsani.
Local NewsLocalIowaWoodbury CountyNebraskaSouth DakotaGovernor Pete RickettsFood Truck FridaysnewsSioux City TransitCOVID-19OromoIDPH
State Iowa har ‘a se’aati booda namni haarawa coronavirus qabame nama 512 ta’uu qabaase
State Iowa har ‘a se’aati booda namni haarawa coronavirus qabame nama 512 ta’uu qabaase. Ogeessonni fayyaa namni 5 dabalataan du’uu gabaasan. Waliigalatti…
To’ataan county duraani Jeremy Taylor ammas irra deebie Woodbury County keessati qabachuuf hojachu
To’ataan county duraani Jeremy Taylor ammas irra deebie Woodbury County keessati qabachuuf hojachu jira. Barcumaan amma kaqabatee Marty Pottebauma dha,…
Kaluu kan nama corona virus qabame Iowa keessatti kan lakkoofsa se’aati 24 keessati kan guyyaa
Kaluu kan nama corona virus qabame Iowa keessatti kan lakkoofsa se’aati 24 keessati kan guyyaa harbaa hanga kamsaa ganamaati qabaman harka lamaan akka…
Magaalan Sioux City harbaa dhuftuu irraa jalqabamee bakke mara keesati haguugi fuula godhatamu godhu
Magaalan Sioux City harbaa dhuftuu irraa jalqabamee bakke mara keesati haguugi fuula godhatamu godhu hedan.Torbaan kana, waajira abukaato Iowa kan walii…